लगाउनैपर्छ टिटानसको सुई ? – Daunne News
लगाउनैपर्छ टिटानसको सुई ?
By Shova GC	 On पुष २८, ११:३०
हामी सोच्छौ, टिटानसको सुईले घाउमा संक्रमण हुन दिदैन । तर के तपाईलाई थाहा छ, टिटानस भनेको के हो ? किन चोट लाग्नासाथटिटानसको सुई लगाउन सल्लाह दिइने गरिन्छ ?
विभिन्न अध्ययनहरुले जनाए अनुसार टिटानस व्याक्टेरियाको संक्रमणका कारण हुने एक गम्भीर रोग हो । नेपालीमा धनुष्टंकार भनेर पनि चिनिने यो रोगले शरीरको तन्त्रिकालाई प्रभावित पार्ने गर्दछ । टिटानस भएमा मांसपेशी सुक्ने तथा खुम्चिने गर्दछ, जसका कराण शरीर बेस्सरी दुख्ने गर्दछ । यसले विशेषगरी बंगारा तथा गर्दनको मांसपेशीलाई प्रभावित पार्दछ । यसकै कारण सास लिनमा समेत कठिनाई उत्पन्न हुने गर्दछ । जसका कारण मनिसकेा मृत्यु समेत हुन सक्दछ ।
टिटानस व्याक्टेरियाको संक्रमका कारण हुने एक गम्भीर समस्या हो । यो रोग क्लास्ट्रीडियम टेटानी नामक बेक्टारियाको संक्रमणका कारण हुने गर्छ । यस्ता व्याक्टेरिया विशेषगरी धुलो, माटो तथा पशु मलमा पाइन्छ । जब यो व्याक्टेरिया कुनै घाउमा प्रवेश गर्दछ, तब शरीरमा टेटनोस्पास्मिन नामक विष पैदा हुन्छ । योे विषाक्त विस्तारै शरीरमा फैलिएर शरीरको तन्त्रिका (मोटर न्युरोन, जसले मांपसेशीलाई नियन्त्रण गर्छ ) लाई असर गरी शरीर अडकिने, जनकडिने जस्ता गम्भीर समस्या निम्त्याउने गर्छ, जुन टिटानसकेा प्रमुख लक्षण हो । समयमै टिटानस विरुद्धको खोप नलगाएमा मानिसको मृत्यु समेत हुनसक्छ ।
मांसपेशीको एैठनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि उपचारका क्रममा कडा औषधी दिइने गरिन्छ । र, यी औषधीको प्रयोगका कारण लामो समयसम्म अस्थिरता वा स्थायी विकलांगता हुनसक्छ । शिशुमा टिटानसको संक्रमण लामो समयसम्म भइरहेमा यसले मस्तिष्कमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ, जसमा सामान्य मानसिक समस्या देखि गम्भीर समस्या सम्म निम्तन सक्छ ।
टिटानसको समयमा नै उपचार नभएमा सास लिनमा कठिनाई उत्पन्न भएर मानिसको मृत्यु समेत हुनसक्छ
बच्चालाई आमाको दूध कति आवश्यक ?
नवलपरासीका एक जना संक्रमित जो बुटवलदेखि काठमाडौंसम्म पुगेर आए